အရောင်းတင်ထားသော ကားများနှင့် ပက်သက်သော အချက်အလက်များ မှန... | CarsDB
အရောင်းတင်ထားသော ကားများနှင့် ပက်သက်သော...
အရောင်းတင်ထားသော ကားများနှင့် ပက်သက်သော အချက်အလက်များ မှန်ကန်ခြင်း မရှိပါက Report တင်နိုင်သည့် CarsDB Website နှင့် Android Application
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကားတွေကို online မှာတင် တစ်နေရာတည်း တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အလျင်အမြန်ဆုံး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်အောင်အတွက် CarsDB ရဲ့ Website နှင့် ဖုန်း Application များကို အသုံးပြုရ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် နှင့် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ယခုအခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ CarsDB ကို အသုံးပြုနေသော လူကြီးမင်းတို့အတွက် Feature တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အရောင်းတင်ထားတဲ့ ကားတွေထဲမှာမှ တစ်စီးတည်းကို နှစ်ခါထပ်တင်ထားခြင်း (သိုမဟုတ်) မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်း၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြထားခြင်း၊ အရောင်းတင်ထားသည့် ကားနှင့်ပက်သတ်ပြီး လွဲမှားခြင်း၊ အချက်အလက်မပြည့်စုံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မပါရှိခြင်း၊ ပါရှိသည့်ဖုန်းနံပါတ်မှာ လွဲမှားခြင်း၊ ဖုန်းမကိုင်ခြင်း၊ ရောင်းထွက်ပြီးသာကားကို ဆက်လက်အရောင်းတင်ထားခြင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် မရှိသေးသည့် တင်ပို့ခြင်းမရှိသေးသည့် ကားများကို လှည့်ဖျားပြီး အရောင်းတင်ထားခြင်းမျိုးတွေ့ရှိပါက ကျွန်တော်တို့ CarsDB ထံသို့ ထို လွဲမှားစွာ ဖော်ပြထားသော ကားများကို Report ပြုလုပ်နိုင်သည့် Feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁. Report ပြုလုပ်ချင်သော ကားရဲ့ စာမျက်နှာကို သွားပြီး အပေါ်ဘက် ညာဘက်ထောင့်က အစက်ကလေး သုံးစက်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၂. ပေါ်လာသော Report Listing လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃. ထိုအခါ မည့်သည့်အတွက်ကြောင့် Report လုပ်ရသလဲ ဆိုသည့် အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ရွေးချယ်ပြီး Submit ကို နှိပ်လိုက်ပါက ကျွန်တော်တို့ CarsDB ရဲ့ Customer Service Team သို့ရောက်သွားပြီး တင်ထားသော ကားနှင့် ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်အမှန်တွေကို ဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကွီးမငျးတို့ရဲ့ ကားတှကေို online မှာတငျ တဈနရောတညျး တဈထိုငျတညျးနဲ့ အလငျြအမွနျဆုံး အရောငျးအဝယျဖွဈအောငျအတှကျ CarsDB ရဲ့ Website နှငျ့ ဖုနျး Application မြားကို အသုံးပွုရ ပိုမိုလှယျကူစရေနျ နှငျ့ ပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျစရေနျ လုပျဆောငျပေးလကျြရှိနပေါသညျ။ယခုအခါမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ CarsDB ကို အသုံးပွုနသေော လူကွီးမငျးတို့အတှကျ Feature တဈခုကို မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ အရောငျးတငျထားတဲ့ ကားတှထေဲမှာမှ တဈစီးတညျးကို နှဈခါထပျတငျထားခွငျး (သိုမဟုတျ) မဖွဈနိုငျတဲ့ စြေးနှုနျး၊ မဖွဈနိုငျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျဖျောပွထားခွငျး၊ အရောငျးတငျထားသညျ့ ကားနှငျ့ပကျသတျပွီး လှဲမှားခွငျး၊ အခကျြအလကျမပွညျ့စုံခွငျး၊ ဆကျသှယျရနျဖုနျးနံပါတျမပါရှိခွငျး၊ ပါရှိသညျ့ဖုနျးနံပါတျမှာ လှဲမှားခွငျး၊ ဖုနျးမကိုငျခွငျး၊ ရောငျးထှကျပွီးသာကားကို ဆကျလကျအရောငျးတငျထားခွငျး၊ မွနျမာပွညျတှငျ မရှိသေးသညျ့ တငျပို့ခွငျးမရှိသေးသညျ့ ကားမြားကို လှညျ့ဖြားပွီး အရောငျးတငျထားခွငျးမြိုးတှရှေိ့ပါက ကြှနျတျောတို့ CarsDB ထံသို့ ထို လှဲမှားစှာ ဖျောပွထားသော ကားမြားကို Report ပွုလုပျနိုငျသညျ့ Feature လေးပဲဖွဈပါတယျခငျဗြာ။
၁. Report ပွုလုပျခငျြသော ကားရဲ့ စာမကျြနှာကို သှားပွီး အပျေါဘကျ ညာဘကျထောငျ့က အစကျကလေး သုံးစကျကို နှိပျလိုကျပါ။
၂. ပျေါလာသော Report Listing လေးကို နှိပျလိုကျပါ။
၃. ထိုအခါ မညျ့သညျ့အတှကျကွောငျ့ Report လုပျရသလဲ ဆိုသညျ့ အကွောငျးအရငျးမှနျကို ရှေးခယျြပွီး Submit ကို နှိပျလိုကျပါက ကြှနျတျောတို့ CarsDB ရဲ့ Customer Service Team သို့ရောကျသှားပွီး တငျထားသော ကားနှငျ့ ပကျသကျတဲ့ အခကျြအလကျအမှနျတှကေို ဖွရှေငျးပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
Posted at: 22-09-2016 10:30 AM